တွင် မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် တိုက်ခန်းများ -18 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
အသစ်ဆုံးသော စာရင်းများကို ကြည့်ပါ။
သင့်အတွက် 18 တိုက်ခန်းများ
ဝယ်ပါ : 198 သိန်း - 5.5K သိန်း
တွင် မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် တိုက်ခန်းများ
・FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 18 တိုက်ခန်းများ
မျိုးတူစု: ထောက်ခံချက်ပေးထားသော မျိုးတူစု: စာရင်းအသစ်များကို ပထမ မျိုးတူစု: ဈေးနှုန်း (များရာမှ နည်းရာသို့) မျိုးတူစု: ဈေးနှုန်း (များရာမှ နည်းရာသို့) မျိုးတူစု: အကြီးဆုံးသော ဈေးနှုန်းလျှော့ချခြင်း (%) မျိုးတူစု: With 3D Tour first မျိုးတူစု: နေထိုင်ရန် ဧရိယာ မျိုးတူစု: အိပ်ခန်းများ မျိုးတူစု: အကွက်အရွယ်အစား မျိုးတူစု: ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ မျိုးတူစု: အရ ဈေးနှုန်းစတုရန်းပေ
ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 750 စတုရန်းပေ
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 1 950 စတုရန်းပေ
126,060 စတုရန်းပေ
ဒေါပုံ, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 850 စတုရန်းပေ
1 1 500 စတုရန်းပေ
1 1 7,987 စတုရန်းပေ
1 Bedroom Apartment for sale in Hlaing, Yangon
လှိုင်သာယာ, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 Bedroom Apartment for sale in Kamayut, Yangon
1 1 1,066 စတုရန်းပေ
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သာကေတ, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
12750 စတုရန်းပေ
စမ်းချောင်း, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
12625 စတုရန်းပေ
1 - 18 ၏ 18 အဖြေများ
ယခင်ကဗမာဟုလူသိများသောမြန်မာနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်ကုန်းတွင်းပိုင်းအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒေသတစ်ခုလုံးတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးတရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ အချို့ကဤတိုင်းပြည်ကိုတောင်အာရှ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ယူမှတ်ကြသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အာဆီယံ (အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း) ၏တရားဝင်အသင်း ၀ င်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီသို့ ဦး တည်နေသည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိစစ်အစိုးရလက်အောက်တွင်ရှိနေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး၎င်း၏စီးပွားရေးသည်အာရှတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဦးတည်ရာများနှင့် ပျမ်းမျှများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ တိုက်ခန်း ဈေးကွက်ကို လေ့လာပါ။
အလယ်အလတ်ရောင်းဈေးသည် မြန်မာ တွင် ခန့်မှန်းချေ 707 သိန်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ရှိ ၁စတုရန်းပေ အတွက် အလယ်အလတ်ဈေးနှုန်းမှာ 1 သိန်းဖြ စ်သည်။ မြန်မာ တွင် ရောင်းရန်အတွက် 18 အိမ်ခြံမြေများရှိသည်။
လူ ဦး ရေ ၅၄ သန်းကျော်နေထိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံး ၅ နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံလူ ဦး ရေ၏ ၅ သန်းကျော်သည်ရန်ကုန် (ယခင်ကရန်ကုန်ဟုလူသိများသော) တွင်နေထိုင်ကြပြီး၎င်းသည်တိုင်းပြည်အတွင်းလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်လာသည်။ အစိုးရသည်နေပြည်တော်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အစိုးရမှဆုံးဖြတ်သည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိရန်ကုန်သည်တိုင်းပြည်၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းရန်ကုန်သည်တိုင်းပြည်၏အရေးကြီးသောစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္hာရေးအချက်အချာဖြစ်သည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဖြစ်သောရွှေတိဂုံဘုရားတွင်အများအားဖြင့်ရေပန်းစားသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်သည်အမည်ဝှက်ကဲ့သို့ရွှေကိုလုံးလုံးဖုံးအုပ်ထားပြီးမျှော်စင်မှာစိန်နှင့်နီလာကဲ့သို့သောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်အပြင်ရန်ကုန်သည်ဆူးလေဘုရားနှင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးတို့ကြောင့်ကျော်ကြားသည်။
ရန်ကုန်သည်နိုင်ငံတကာ visitors ည့်သည်များအကြားလူကြိုက်များသော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကခရီးသွားနေရာမှာရှေးပုဂံမြို့ဖြစ်သည်။ ဤယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာသည် ၉ ရာစုမှ ၁၃ ရာစုနှစ်များအတွင်းအင်အားကြီးပုဂံနိုင်ငံတော်၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ဘုန်းအသရေလက်ထက်၌၎င်းသည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်အကြီးမားဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ ၂၀၀၀ ခန့်သာကျန်ရှိတော့သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဘုရားကျောင်းအချို့မှာအာနန္ဒာဘုရားကျောင်း၊ ရွှေဇီဂံဘုရားကျောင်း၊ ဓမ္မစေတီဘုရားကျောင်း၊ ထီးလင်မင်ဘုရားကျောင်း၊ ည့်သည်များသည်ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ ကားများသို့မဟုတ်အထက်မှပူသောလေပူဖောင်းဖြင့်တောင်တက်ကျောင်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။
ရန်ကုန်နှင့်ပုဂံအပြင်မန္တလေးသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လူကြိုက်များသည့်မြို့လည်းဖြစ်သည်။ မြို့တော်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးနေရာများမှာမြွေဘုရား၊ မဟာမူဟီဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းနှင့်မန္တလေးတောင်တို့ဖြစ်သည်။ မြို့နှင့်သိပ်မဝေးလှသော Dat ည့်သည်များသည်ခမ်းနားထည်ဝါလှသော Dat Taw Gyaint ရေတံခွန်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ“ တိုက်ခန်း” ဟူသောဝေါဟာရကိုဓာတ်လှေကားများမရှိသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သို့သော်နိုင်ငံတွင်းရှိတိုက်ခန်းအသစ်များတွင်ဓာတ်လှေကားများရှိသည်။ ၀ ယ်သူများအတွက်ရနိုင်သောအဓိကတိုက်ခန်းအမျိုးအစားမှာအဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများ၊ အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းများဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်း၌တိုက်ခန်းဟောင်းများရှိသော်လည်းနိုင်ငံခြားသားအများစုသည်အသစ်တည်ဆောက်ထားသောခေတ်သစ်အိမ်များတွင်နေထိုင်ကြသည်။
ပုံမှန်တိုက်ခန်းများသည်များသောအားဖြင့်ကားပါကင်ကဲ့သို့သောသာယာအဆင်ပြေမှုများရှိသည်။ သို့သော်သူတို့တွင်ဓာတ်လှေကားမရှိနိုင်ပါ။ ၀ ယ်ယူသူများသည်စတူဒီယိုခန်းများသို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်နံရံများအစားပါးလွှာသောအခန်းကန့်များပါရှိသောနံရံများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများကိုနာမည်ကြီးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများမှတည်ဆောက်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင်များသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားသောအခန်းတစ်ခန်းရှိပြီးအခန်းတစ်ခုစီကိုတကယ့်ကွန်ကရစ်နံရံတစ်ခုဖြင့်ခွဲထားသည်။ အခန်းအရွယ်အစားသည်စတူဒီယိုခန်းတစ်ခန်းမှအိပ်ခန်းသုံးခန်းအထိရှိပြီးအကျဆုံးမှာသုံးခန်းပါသောတိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများသည်များသောအားဖြင့်ဓာတ်လှေကားများ၊ သတ်မှတ်ထားသောကားရပ်နားရန်နေရာများနှင့်လုံခြုံရေးအစောင့်များကဲ့သို့သောပုံမှန်တိုက်ခန်းများထက်သာယာအဆင်ပြေမှုများရှိသည်။
တန်ဖိုးအရှိဆုံးတိုက်ခန်းအမျိုးအစားမှာတိုက်ခန်းများဖြစ်သည်။ ပန်းခြံများ၊ ကားရပ်နားရာနေရာများ၊ ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးစနစ်များအပါအ ၀ င်ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာများ၊ ရေကူးကန်များ၊ ကလေးကစားကွင်းများ၊ ပန်းခြံများ၊ ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးစနစ်များ၊
မြန်မာ တိုက်ခန်း တွင် အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ခြံမြေ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမျ
တိုက်ခန်း အရွယ်အစား ပျမ်းမျှ ဈေးနှုန်း 1 အိပ်ခန်း (15 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 877 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (1 တိုက်ခန်းကြည့်ပါ) 700 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (2 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 3,500 သိန်း
အခြားသောအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနည်းတူမြန်မာနိုင်ငံရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်သည်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အတော်လေးတတ်နိုင်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်လူနေမှုစရိတ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် (၄၀%) နိမ့်သည် (ငှားရမ်းခများမပါ) ။ သက်သောင့်သက်သာနေထိုင်နိုင်ရန်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်လလျှင်အနည်းဆုံးကျပ် ၁,၉၀၀,၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၀၀) လိုအပ်ပြီးမိသားစုလေးယောက်မှမိသားစုသည်အနည်းဆုံးကျပ် ၃,၃၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ခန့်) လိုအပ်သည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) သည်နိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်အသုံးပြုသောငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၁ ဒေါ်လာတန်ဖိုက်သည်ကျပ် ၁,၃၆၀ ခန့်ရှိသည်။ ယခင်ကနိုင်ငံတကာကဒ်များကိုလက်ခံသော ATM စက်တစ်ခုရှာဖွေရန်မှာမလွယ်ကူခဲ့ပါ၊ သို့သော်ယနေ့တွင်တိုင်းပြည်အတွင်း၌ ATM စက်များပိုမိုတွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ငွေသည်ဘုရင်ဖြစ်နေသောကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းခရီးသွားသည့်အခါ visitors ည့်သည်များ ၀ င်ငွေရရန်အကြံပြုလိုသည်။ သို့သော်လူအများစုသည်အရိပ်အကဲအများဆုံးငွေတောင်းခံလွှာများကိုသာယူလေ့ရှိသဖြင့်သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများကိုမပျက်စီးစေဘဲကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန်သေချာစေပါ။ ခရီးသွား areas ည့်areasရိယာတော်တော်များများတွင်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလက်ခံသည်။
ဌာနေတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများစွာကိုဗမာပြည်တွင်ပြောဆိုကြသော်လည်းနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေအများစုသည်တရားဝင်ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သောဗမာစကားကိုပြောဆိုကြသည်။ လူအများစု၊ အထူးသဖြင့်အဓိကမြို့ကြီးများနှင့်ခရီးသွား areas ည့်Englishရိယာများတွင်အင်္ဂလိပ်စာကိုအချို့သောအတိုင်းအတာအထိနားလည်ရန်နှင့်ပြောနိုင်သည်။ သို့သော်နိုင်ငံခြားသားများသည်သာမန်မြန်မာစကားစုအချို့ကိုလေ့လာသင်ယူရန်အကြံပြုလိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးဘာသာတရားမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၉၀% ခန့်ကထေရ ၀ ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်လောကဝတ်များသည်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏နက်ရှိုင်းစွာလွှမ်းမိုးမှုခံနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်၊ မဟာယနဗုဒ္ဓ ၀ ါဒ၊ ၀ ိရဂါရဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်အန္တိအမ်ဘာသာများအပါအ ၀ င်အခြားဘာသာတရားများကိုနိုင်ငံတွင်း၌ကျင့်သုံးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကာလရှည်ကြာနေထိုင်ရန်နှင့်နေထိုင်ရန်နိုင်ငံခြားသားများသည်တည်းခိုခွင့်ဗီဇာနှင့်အကြိမ်များစွာခရီးအထူးအထူးဗီဇာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးလမှ ၁၂ လအထိထုတ်ပေးနိုင်သော်လည်းဝင်ခွင့်တစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံခြားသားများသည်ထိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်စဉ်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာ။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်အတွက်အကြိမ်များစွာခရီးသွားအထူးအထူးဗီဇာလိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဓိကအကြောင်းအရင်း ၄ ခု
1. ၁။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု - ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆% မှ ၈% အထိတိုးတက်ခဲ့ပြီးအရှေ့တောင်အာရှတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်သောစီးပွားရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ဂျီဒီပီသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈.၉ ဘီလီယံမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၉ ဘီလီယံအထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
2. ၂။ ငှားရမ်းခ - မြန်မာနိုင်ငံသည်အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းလိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောငှားရမ်းခကိုပေးသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းပျမ်းမျှငှားရမ်းခအထွက်နှုန်း 8% နှင့် 12% အကြားဖြစ်ပါတယ်။
3. ၃ ။ မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ - ၎င်းနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိသည်။
4. အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းရန် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားခြင်း - နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များလည်းများပြားလာသည်။ ဤအချက်သည်တိုင်းပြည်အတွင်းကာလတိုနှင့်ကာလရှည်အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းခြင်းအတွက်မြင့်မားသော ၀ ယ်လိုအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
18 တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော